War deg deg ah: Qodobo hor u dhac oo la isku afgartey shirka Somalida ee Adis Ababa – SBC
War deg deg ah: Qodobo hor u dhac oo la isku afgartey shirka Somalida ee Adis Ababa
Posted by editor on May 23, 2012 Comments
Shirkii magaalada Adis Ababa ee caasimada Itoobiya uga socdey madaxda dhinacyada siyaasada Soomaalida ayaa maraya qir iyo qir iyadoo la isku maandhaafsan yahay qodobo ka mid ah arimaha laga doodaya ee ku aadan hanaanka geedis socodka loogu jiro “Tubta Nabadda” (Road Map).
Inkastoo ilaa sadex jeer shirka lagu kala kacay oo caro kuraasta looga kacay hadana yadiidalada beesha caalamka iyo goobjoogayaasha shirku ay heleen ayaa ah in ka Siyaasiyiinta Soomaalida ee shirka ku sugan ay isku raaceen qaar ka mid ah arimaha muranku ka taagan yahay.
SBC ayaa ogaatey in lixda nin ee saxiixayaasha “Tubta Nabadda” ay isku raaceen in arinta muranka dastuurka qaybada ah ka aloosan lagu xalilo in nin kasta uu soo magacowdo 3 qof oo wakiil ka ah, iyadoo 18-kaasi qof ay dib u eegis ku sameyn doonaan qodobada dastuurka ku qoran waxayna hawshoodu noqonaysaa.
1: In ay dib u eegis ku sameeyaan dastuurka
2: In qodobada lagu muransan yahay wixii wax ka badal ah ay ka doodaan, wixii kordhin iyo ka saarid ah sidoo kale ka doodaan.
Sidoo kale saxiixayaasha Qariirada Nabada waxay isku raaceen in Odayaashu dhaqanka ay ku soo xulaan gudiga ansixinta dastuurka ka hor 12-ka June.
In magaalada Muqdisho la isagu keeno golaha dastuuriga ah oo ansixinaya dastuurka, isla markaana doonarana Baarlamanka cusub 12-ka June.
In 20-ka August dalwada cusub lagu dhawaaqo isla markaana halkaasi looga gudbo nidaamka KMG.
Inkastoo qodobadan hor u dhaca ah ay ku heshiiyaan lixda siyaasi ee ah saxiixayaasha Road Map-ka hadana wali waxaa jira kala aragti duwanaansho ku saleysan 35 qodob oo dastuurka ku qoran kuwaasi oo intooda badan ay Puntland dalbatey in wax laga badalo arintaasi oo noqotey mida ugu weyn ee shirka hareysay.
Warar SBC ka heshay ilo wareed oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in xaley saqidii dhexe shirka lagu kala kacay iyadoo lagu balamay in saaka la isku soo laabto, waxaana warar sheegaya in saaka Ra’isalwasaaraha Itoobiya Meles Zinawi uu kulan la qaadanayo dhinacyada siyaasada Soomaalida, iyadoo taasi ugu wacan tahay beesha caalamka oo ka codsatey Zinawi in uu arintan faraha la galao maadama xiligii shirku ahaa in uu soo gabagaboobo uu dhaafay, arintaasi oo wal wal ka qabaan wakiilada beesha caalamka ee shirka ku sugan.
Warar Dheeraad ah SBC Kala soco
firdhiye meel uu ku jiro waxba ka hagaagi maayaaan somaliyey